Is maamulkii Canfarta oo Itaal mooday warar Been ah iyo Sawiro dad bukaan jiif ah laga soo qaaday. – Xeernews24
Is maamulkii Canfarta oo Itaal mooday warar Been ah iyo Sawiro dad bukaan jiif ah laga soo qaaday.
14. Oktober 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Kadib weerarkii shalay ay is maamulka dawladda deganka canfartu ku soo qaadeen galbeedka gabolka Sitti, islamarkaana dadka deegaanku ay isku difaaceen waxay maamulka canfartu oo kaashanaya buuralayda xagjirka ah iyo saxaafada TPLF ee nacaybka soomaalidu ka buux dhaafiyey bilaabeen faafinta warar been abuura oo canfarta laga dhigayo dad jiritaanka dalka itoobiya difaacaya islamarkaana ay weerar ugaysteen ciidamada ka socday dalka Djibouti.
Hadaba dadaal badan kadib ciidanka difaaca qaranka iyo wasaaradda gaashaandhiga dalka Itoobiya ayaa maanta soo saaray bayaan saxaafadeed, kaasoo lagu beeniyay jiritaanka warka buuralaydu lawareegayso.
Bayaankan oo kasoo baxay xafiiska taliye kuxigeenka milatariga General Burhanu Julla, ayaa lagu yidhi.
*wararka baraha bulshada lagu baahinayo ee sheegaya in ciidanka qaranka dalka Djibouti uu laayay shacab canfar ah ama uu xuduuda itoobiya kusoo xad gudbay waa mid been ah oo aan sal iyo raad lahayn.
*Djibouti iyo itoobiya waa laba wadan oo dad iyo dhaqan wadaaga mana jirto sabab ciidanka Djibouti uu arintaasi useemyo mana ahan xitaa mid kujirta maskaxda shacabka iyo xukuumada Djibouti.
*wararkan waa kuwa looga danleeyahay abuuritaanka qas iyo colaad horleh mana ahan kuwa loo dulqaadan doono. Waana in laga waantoobo.
*ugu danbayn waxaa jira weeraro iyo duulaan 12 bilood jirsatay oo jabhado iyo kooxo xagjir canfar ah ayku soo qaadaan shacabka xoolada raacaddada ah ee ku nool galbeedka gobolka Sitti gaar ahaan degmadda Gablalu qabalaha loo yaqaan Cadayle iyo Jiijaale oo ah degaamo ka mid ah dhulka Soomaali-State.
Wararkan iyo sawiraddan been abuurka ah waa Sawirro laga soo duubay dad buukan jiif ah oo yaalay dhakhtaro oo dumar iyo caruur sidda la wada og yahay goobaha lagu dagaalamay waa dhul daaqsimeed dadkii xoola dhaqadada ahaa ay ka barakeceen oo ay jabhadaha Canfartu ka qoteen dhuufayso waa-wayn.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/Hammiga-Canfarta.jpg 960 960 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-14 17:13:012019-10-14 17:13:01Is maamulkii Canfarta oo Itaal mooday warar Been ah iyo Sawiro dad bukaan jiif ah laga soo qaaday.
Wax ka Ogoow Hammigga ummadda Canfartu ku Midaysan yihiin Jaaliyada reer Sitti ee ku dhaqan Dalka Sweden oo Shirkii sagootin ah u qababtay...